नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर निर्माण कार्य अधुरै – Sky News Nepal
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर निर्माण कार्य अधुरै
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार २०:२४ मा प्रकाशित
साउन १५, जाजरकोट । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा निर्माण हुने भनिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर ६० महीनासम्म पूरा भएको छैन । कुल ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा प्रगति नहुँदा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
आयोजनाको डिपिआरको काम अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरिरहेको छ । स्मेकले डीपीआरको काम करीब ८५ प्रतिशत सकिएको र बाँकी १५ प्रतिशत कामका लागि सन् २०२१ को सेप्टेम्बरसम्ममा काम पूरा हुने जानकारी दिएको छ ।
स्मेक, एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्तरुपमा डिपिआरको काम गरिरहेका छन् । सन् २०१६ मा नै ३१ महीनामा डिपिआरको कामसक्ने गरी नलगाड जलविद्युत् कम्पनी र सम्बद्ध परामर्शदाता कम्पनीबीच सम्झौता गरिएको थियो ।
यसअघि डीपीआरकर्ताको मागअनुसार अगष्ट २०१९ मा पहिलोपटक तीन महिना र अगष्टदेखि मे २०२० सम्म नौ महिना दोस्रोेपटक डीपीआरको समयावधि थप भइसकेको छ । अझै काम नसकिँदा कामको गतिदेखि स्थानीयवासी शंका गर्न थालेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुनेरूपमा अघि बढाएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन प्रयास गर्दै आएको छ । जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ । त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरमा जाइकासँग पटकपटक छलफल गरिएको थियो ।
डिपिआरको हालसम्मको तयार भएको विवरणअनुसार आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट लागत रू. ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित रू. ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलाशय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने देखिएको हो ।
नलगाड–७ दल्लीमा विद्युत्गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल निर्माण हुनेछ । नलगाडस्थित नलगाड खोला र ठूलीभेरीको दोभान दल्लीमा भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । आयोजनाका लागि बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८ दशमलव ५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र दुईदेखि तीन किलो मिटरसम्मका तीन सहायक सुरुङ बन्नेछन् ।
यस्तै २४८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुनेछ । आयोजनामा चार टर्वाइन रहने छन् । प्रत्येक टर्वाइनबाट १०४ दशमलव २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट एक वर्षमा एक हजार २३२ मेगावाट (घण्टा) ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोहलपुर सवस्टेशनमा जोडिने छ । नलगाडकै दानीपीपलमा ४०० केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेशन निर्माण कार्य जारी छ । नलगाड निर्माणकै लागि भन्दै चार मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम गर्नका लागि डीपीआरको काम जारी छ । रासस